Ahoana ny fomba hahazoana vola amin'ny Twitch | vaovao e-varotra
Ahoana no fomba ahazoana vola amin'ny Twitch
Encarni Arcoya | 15/05/2022 23:00 | Varotra ara-tsosialy
Raha manana orinasa ianao, dia azo inoana fa te hahazo vola amin'izany ianao. Saingy indraindray, tsy ny fidiram-bola ihany no afaka miditra amin'ny alàlan'ny orinasanao; Afaka manao izany amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy ihany koa izy ireo. Ary indrindra indrindra, amin'ny alàlan'ny streaming. Amin'izao fotoana izao, afaka mieritreritra ny Youtube ianao, fa ny marina dia izany misy tambajotra sosialy lehibe kokoa ary afaka manome karama tsara kokoa ho anao izany. Fantatrao ve ny fomba hahazoana vola amin'ny Twitch?
Raha vao avy nahatsikaritra anao izahay dia te-hahafantatra ny fomba hahazoana loharanom-bola hafa ankoatra ny orinasanao, dia mahaliana anao ny hazavainay. Ary betsaka.
1 Twitch, sehatra votoaty mivantana vaovao
2 Ohatrinona ny vola azo amin'ny Twitch
3 Ahoana no fomba ahazoana vola amin'ny Twitch
3.1 Ny "mpiandry"
3.3 Dokam-barotra amin'ny Twitch
3.4 Fanohanana, mpiara-miasa...
4 Ohatra azo ampiharina mifantoka amin'ny eCommerce
Twitch, sehatra votoaty mivantana vaovao
Araka ny fantatrao, rehefa miresaka momba ny horonan-tsary isika dia mahazatra ny mieritreritra ny YouTube. Ny mivantana, angamba Facebook na Instagram bebe kokoa. Fa ny marina dia izay tokoa Twitch dia nahavita naka ny tsara rehetra tamin'ny tambajotra sosialy ary natambatra ho iray.
Azontsika lazaina izany Twitch dia sehatra mivantana misy horonan-tsary mivantana, fa misy ihany koa azo raketina sy ovaina. Na izany aza, ny zava-dehibe indrindra dia ny voalohany, satria izy io dia mitovitovy amin'ny fahitalavitra mahazatra indrindra.
Ny fiasan'ny Twitch dia misy ifandraisany amin'ny endrika freemium, izany hoe, izany raha hijery horonan-tsary ianao dia mila mandany doka tsindraindray na azonao atao ny misoratra anarana amin'ny maha-mpikambana amin'ny fantsona iray ary tsy hahita ireo doka intsony ianao ankoatra ny fananana asa fanampiny hafa.
Ohatrinona ny vola azo amin'ny Twitch
Azo antoka fa rehefa nanontany anao izahay ny fomba hahazoana vola amin'ny Twitch Efa tonga ao an-tsaina ny vola be ataon'ny streamers sasany navoakan'ny besinimaro, indraindray misy tarehimarika efatra, dimy na enina aza. Fa tsy maintsy mampitandrina anareo izahay. Tsy hanatona sy hahazo izany. Tsy latsa-danja kokoa.
Voalohany dia mila mampahafantatra ny tenanao ianao ary midika izany fa tsy maintsy manokana fotoana, indraindray mieritreritra ny hanipy ny lamba famaohana, sy ny maro hafa miezaka ny haka tahaka ny hafa. Fa izany rehetra izany dia traikefa sy fotoana, ary tsikelikely, raha mahavita mifandray amin'ny mpihaino anao ianao dia afaka manomboka mahazo vola.
Aza mieritreritra àry fa ho alina fotsiny izao, lavitra azy. Miezaka ny miasa mafy mba hahazoana ny "fantsonao", ny "marika"-nao mba hatomboka amin'ny hafa.
Noho izany dia tsy afaka milaza aminao izahay hoe ohatrinona ny vola azo amin'ny Twitch satria miankina amin'ny lafin-javatra maro no raisina. Ny fantsona nosokafan'ny olona malaza dia tsy mitovy amin'ny an'ny olona iray izay fantatry ny fianakaviany sy ny namany akaiky.
Izany hoe, tsy miteny izahay hoe tsy afaka mahazo vola koa ianao. Raha ny marina dia azonao atao, ary misy fomba maro ahafahana manatratra izany. Tianao ho fantatra ve izy ireo?
Ny mpanjifa dia midika hoe Twitch ho ireo olona misoratra anarana amin'ny fantsona mba tsy hahita ny doka (izay mavesatra be indraindray) ary mahazo endri-javatra hafa (ohatra, stickers manokana). Nefa koa ary izany dia zavatra tsy fantatry ny maro, afaka miresaka amin'ny mpandray anjara amin'ny lahatsary ianao. Izany hoe afaka miresaka na manoratra aminy ianao.
Noho izany antony izany, maro no mandoa ny famandrihana sy iray amin'ireo fidiram-bola azo antoka indrindra ho azonao, raha mbola mifandray tsara amin'io vondrona io ianao ary mahazo azy ireo hanavao isam-bolana.
Twitch dia mandoa anao ny 50% amin'ny famandrihana an'io mpanjifa io, ary ny iray kosa tazoniny. SAINGY rehefa efa mihoatra ny 10.000 ny mpijery, avy eo ny fizarana lasa mahazo tombony kokoa ho anao, manodidina ny 70/30.
Ary ohatrinona ny sandan'ny famandrihana? Heverinay fa hiankina amin'ny fantsona izany fa amin'ny ankapobeny dia 3,5 euros isam-bolana. Ka tsy vola heverin’ny maro fa mandrara izany.
Fomba iray hafa hahazoana vola amin'ny Twitch dia fanomezana, na toro-hevitra, na inona na inona tianao hiantsoana azy. Fomba fisaorana ampahibemaso ny mpandray anjara amin'ny lahatsary noho ny ezaka ataony amin'ny fantsona sy ny horonan-tsary ary fomba iray hanomezana valisoa azy ireo.
Ny tsara indrindra rehetra dia ny vola omena dia 100% ho an'ny mpampiasa, Tsy miditra eto hametraka ny tanany i Twitch satria fantany fa raha omena azy dia satria tena mendrika izany izy.
Raha ny momba an'i Espaina dia tsy mitaky be loatra izany, fa mety ho fidiram-bola iray fanampiny amin'ny alàlan'ny Twitch.
Dokam-barotra amin'ny Twitch
Toy ny amin'ny tambajotra hafa toa ny YouTube, afaka mametraka doka karama ianao hahazoana tombony bebe kokoa. Ahoana? Ao amin'ny dikan-twitch maimaim-poana dia efa fantatrao fa manana doka izy ireo. koa, azonao atao ny maka vola an'io dokambarotra io, na dia hizara izany amin'ny Twitch ianao.
Raha ny marina, rehefa lasa manan-danja ny fantsona, dia manana fahafahana hiteraka fidiram-bola bebe kokoa, hatramin'ny fampisehoana doka amin'ny mpanjifa. Mazava ho azy fa mila mitandrina ianao ary tsy manao izany loatra satria amin'izay fotoana izay atahoranao fa ny volana manaraka dia ho voafafa ny famandrihana.
Ankehitriny isika dia miroso amin'ny fanaovana kopia amin'ny Facebook ary indrindra amin'ny Instagram. Ary manao izany izahay satriaNy orinasa dia mitady betsaka amin'ny Twitch amin'ny fiaraha-miasamiaraka amin'ireo manana fantsona mavitrika indrindra ary manana mpanjifa be indrindra amin'ny dokam-barotra ny vokatra. Mety ho lalao video izany, mety ho hetsika, mety handefa doka eo afovoan'ny horonan-tsary mivantana…
Noho izany, mandoa anao ny orinasa ary manao dokambarotra ianao. Tsy misy intsony. Mazava ho azy fa tsy mety hoe manohitra zavatra ianao ary manambara izany avy eo, na hoe mpanohana anao izany. Diso daholo izany satria ho voamarika ho "mivarotra" ianao. Saingy mety ho be ranony izy ireo raha jerena ny tarehimarika.
Ohatra azo ampiharina mifantoka amin'ny eCommerce
Eny, fantatray fa amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ianao fa ho an'ny streamers sy influencers bebe kokoa izany, fa ho anao dia tsy mety izany. Saingy marina izany? Tsy mety amin'ny eCommerce ve izany? Eny ary ny marina dia diso ianao.
Aleo apetraka ohatra amin'ny fivarotana akanjo mandray vaovao isan-kerinandro. Maninona raha manao horonan-tsary mampiseho ireo zava-baovao ireo ary manome laharam-pahamehana ny mpijery rehetra mba hahafahany manafatra ny akanjo tiany indrindra? Afaka nanandrana izany mivantana mihitsy aza izy ireo ary dia toy izany no mahatonga ny olona hahita ny fomba fijery.
Vidéo viraliny ity satria maro ny olona mety ho liana amin'ireo stream mivantana ireo izy ireo ary hisoratra anarana hijery izany tsy misy doka, fa koa hifanerasera amin'ny mpandray anjara ary asehoy azy indray ny akanjo na hamaha ny fisalasalana.
miaraka amin'io video io afaka manana sponsorship ianao (marika akanjo), azo atao ny misoratra anarana ary azo omena koa ny fanomezana mba hanaovana azy ireo
Tsy izay ihany anefa. Safidy video mivantana iray hafa dia mety miaraka amin'ny fivarotana. Asehoy hoe manao ahoana izy io, aiza izy io, ary resaho ny lokon'ny vanim-potoana, ny akanjo azo anaovana, na manampy ny olona hahafantatra ny fomba fampifangaroana akanjo. Izany rehetra izany amin'ny eCommerce dia mety hahazo tombony amin'ny alàlan'ny Twitch, mainka fa satria mbola tsy voarara loatra.
Ary afaka manao toy izany koa isika amin'ny fivarotana lalao video, fivarotana teknolojia...
Sahy mahazo vola amin'ny Twitch ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovaon'ny ECommerce » eCommerce » Varotra ara-tsosialy » Ahoana no fomba ahazoana vola amin'ny Twitch
Inona no atao hoe Etsy
Inona ny IP telephony ary ahoana no ahafahany manampy ny orinasanao?